Ogwe Ntụpọ Oche Oche China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwe Ntụpọ Oche Oche - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 11 Ngwaahịa maka Ogwe Ntụpọ Oche Oche)
Ọmarịcha ogwe ọkụ na-egbuke egbuke
N'ihi nkà na ụzụ ọhụrụ ya, ọkụ ọkụ ahụ dị ọkụ na-adịwanye mma, ogologo oge yana obere ihe. Oge kachasị ọkụ bụ awa 20. Batrị lithium-ion dị elu dịka 50 gram (kwa mkpọ) ma bụrụ ndị a na-adịghị ahụ anya na ndị na-enweghị ike ime n'ime ogwe aka. "Njigide Mgbochi" na-eme ka ọbara gbasaa na mkpịsị aka. Iji...
Okpukpo okpukpu atọ na-achịkwa ogwe ụkwụ elu ọkụ
Okpukpo okpukpu atọ na-achịkwa ogwe ụkwụ elu ọkụ Mgbaaka mgbanaka ndị a na-agbanye ọkụ / kpoogba ọgba tum tum na-ekpo ọkụ. Nke a na-enye aka na batrị li-ion 7.4v, nke nwere nhazi ihu igwe atọ, onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ọkwa kachasị mma maka ịdabere na njiri onwe onye. Nkọwapụta Ngwaahịa: akpụkpọ ụkwụ mkpịsị aka + azụ...
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe nkiri a na-ekpo ọkụ bụ imewe maka ikpocha ọkụ oche kpo oku Ihe kacha mma maka ikpo ọkụ ọkụ Nnukwu radiation nke ọma nke na-adị mma n'ahụ ahụ mmadụ Enwere ike iji ya mee ihe dịka ọgwụgwọ okpomọkụ maka nlekọta ahụ ike Ntuzi onwe onye , enweghi nchegbu maka nsogbu ikpo oku Mmiri mmiri,...
Ogwe Ntụpọ Oche Oche Ogwe ntụpọ oche oche Obere Ntaneti Ụlọ Obere Egwu Nchekwa Nche Igwe oche oche oche Ihe na-ekpo ọkụ oche oche Egwuregwu Ntanetị Ịkụcha ihe Ime ụlọ Greenhouse